Ii-FAQs -I-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd.
Izakhelo Portal. Izakhelo zamasango ngokubanzi zizakhiwo eziphantsi, ezibandakanya iikholamu kunye nokujikeleza okuthe tyaba okanye okuxhonyiweyo, okunxulunyaniswa ngokudibana okungagungqiyo okomzuzwana ... Olu hlobo lwesakhiwo sesakhelo oluqhubekayo luzinzile kwinqwelo-moya yalo kwaye lubonelela ngesithuba esicacileyo esingathintelwanga ngumkhonto.
Isakhelo sesinyithi yindlela yokwakha ene "skeleton frame" yeentsika ezime nkqo kunye neI-beams ethe tyaba, eyakhiwe kwigridi yoxande ukuxhasa imigangatho, uphahla kunye neendonga zesakhiwo eziqhotyoshelwe kwisakhelo. Ukuphuhliswa kwale ndlela kwenza ukuba ukwakhiwa kwesikrweqe kwenzeke.
Ngenxa yokuba isakhiwo sentsimbi sineenzuzo ezininzi. Okokuqala, amandla aphezulu. Umlinganiso ophezulu wamandla ukuya kubunzima (amandla ngeyunithi nganye). Okwesibini, ubungqingqwa obunamandla kunye nokumelana nenyikima. Melana ne-deformation ebanzi ngaphandle kokusilela nangaphantsi koxinzelelo oluphezulu. Okwesithathu, ukuthamba, ukufana kwezinto. Uqikelelo lweepropathi, kufutshane noyilo lokucinga. Okwesine, ukukhululeka kokuqamba kunye nesantya sokwakhiwa.
Ungaluthintela njani uphahla lwentsimbi kunye nokuvuza kodonga lwesakhiwo sentsimbi yokusebenzela?
Eyona ndlela yokumisa ukuvuza ngaphambi kokuba iqale. Nantsi indlela yokumisa uphahla lwentsimbi kunye nokuvuza kodonga:
1. Khetha ikhithi yokwakha yensimbi ephezulu. Zonke iinkqubo zokwakha zentsimbi azenziwanga zilingana. Iinkqubo zokwakha zentsimbi zeRHINO, umzekelo, zibandakanya izinto ezininzi zokuthintela ukungena kwamanzi eziyilelwe ukugcina kungabikho ngxaki kwisakhiwo sakho.
Okokuqala, ulwakhiwo lwethu lwensimbi oluqinileyo lukhusela ngokuchasene nomonakalo ovela kwimvula kunye nekhephu.
Okwesibini, i-RHINO ibandakanya iipaneli zentsimbi ezikumgangatho ophezulu ezingama-26 ze-purlin ethwele ubambo (PBR) kwiphakheji esemgangathweni, ngaphandle kwexabiso elongeziweyo. Iipaneli ze-PBR zibonelela ngamandla amakhulu kunye nokugqobhoza okunzulu phakathi kweepaneli, kulusu lolwakhiwo olomeleleyo ngakumbi kuneepaneli ezincinci ze-R ezisetyenziswa zizakhiwo zentsimbi ezinamaxabiso aphantsi.
Okwesithathu, iRHINO ibandakanya i-top-of-the-line, i-self-drilling, i-screws enganyangekiyo i-rust kunye ne-washer ezihlala ixesha elide zokukhusela ukutywina.
2. Faka izikrufu ngokufanelekileyo. Akukho nkqubo yokuzila itywina kakuhle ngaphandle kokuba izikhonkwane zifakwe ngokuchanekileyo.
Okokuqala, izikrufu kufuneka zibethe isakhelo sensimbi esingezantsi. Ukuba isikrufu siyiphosile i-purlin okanye i-girt, iwasha ayitywinanga, kwaye ukuvuza akunakuphepheka.
Okwesibini, ukuthintela ukuvuza kwezikrufu zokuzibamba ezifakela uphahla lwentsimbi kunye neepaneli zodonga kufuneka zigrunjwe ngokuthe tye, hayi goso.
Okwesithathu, izikrufu ezineewasha kufuneka zombiwe kubunzulu obuchanekileyo. Ukuba itywina ligqithisile, uxinzelelo olungaphezulu kunokuvuza. Ukuba ayiqiniswanga ngokwaneleyo, iwasha ayenzi uphawu oluqinileyo, kwaye inokuvuza.
Xa ifakwe kakuhle kwaye igcinwe kakuhle, izinto zokubopha zeRHINO akufuneki zivuze.